Gospel Archives — njem Lee - Official Site
Mgbe m na-eme na-eche nke ahụ dị mma na ebube, Echeghị m na ọ bụ dị ka nnukwu dị ka ụfọdụ mee ka ọ bụrụ. Ụbọchị ọ bụla e nwere…
Ọ bụla ugbu a na mgbe ahụ ga m agwa onye ga-ekwu na ha chọrọ ịghọ a Christian, ma ha na-eche oge a abụghị nnọọ ziri ezi. Mgbe m na-arịọ ha ihe mere, ha kọọrọ m ihe niile ha mmehie ha, niile nke adịghị ike ha, na ndi nile messed elu ihe ha na mere n'oge gara aga. Ọ dịghị mgbe m na-arụ ụka na ha banyere mmehie ha, ma m na-eme inupụ ndị ha na-echiche.
Ha na-anya isi na mmehie n'ụzọ ụfọdụ disqualifies ị ịbịakwute Christ, mgbe ihe dị nnọọ iche bụ eziokwu. N'ịbụ onye mmehie anaghị eme ka anyị ghara Christ; ọ bụ ihe mere anyị mkpa Ya. Ọ bụrụ na anyị echere ruo mgbe anyị anya zuru okè makụọ ya na anyi ga na-eche ruo mgbe ebighị ebi.
Na otu n'ime ndị kasị amasị m ruturu, Charles Spurgeon-agba anyị ume ka ha kwụsị achọ ka onwe anyị, na-amalite na-achọ ka Jesus. ọ na-ekwu:
"The! ị na-ekwu, 'M echegharịghị ezu.' Nke ahụ na-achọ onwe gị. 'Ekwetaghị m ezu.' Nke ahụ na-achọ onwe gị. 'Abụ m kwa erughị eru.' Nke ahụ na-achọ onwe gị. 'M nwere ike ịchọpụta,'Ọzọ na-ekwu, 'Na m nwere ihe ọ bụla ezi omume.' Ọ bụ nnọọ ikike ikwu na i nwere ihe ọ bụla ezi omume; ma ọ bụ nnọọ ihe na-ezighị ezi anya n'ihi na ihe ọ bụla. It…
-ekwusa Kraịst, Gosi ha Otuto
A video na-agụ agụ bụ site Njem si General Oge Ọzụzụ na Hapụrụ Conference 2013.
Isiokwu nke a ogbako bụ Soli Deo Gloria, ma ọ bụ Chineke otuto naanị. Nke ahụ bụ oké isiokwu. Na na anyị chọrọ ka n'ọnọdụ - na otuto nile na Universe bụ nke Chineke naanị, na-agwa ọ bụla otu ihe anyị na-eme. N'oge m n'abalị a, Achọrọ m echiche banyere otú na-agwa anyị evangelism.
Ịgwa ndị mmadụ banyere Jizọs yiri ka otu n'ime ihe ndị ahụ na anyị nile maara na anyị kwesịrị ime, ma anyị niile na mwute maka na ọ dịghị eme ezu. Abụ m nri? Abụ m naanị na? Ọbụna dị nnọọ a gara aga izu, M na-enwe obi mara ikpe n'ihi na a mmekọrịta M wee malite iwu na otu nke ndị agbata obi m ka ụdị malitere ada oyi. Enwebeghị m dị ka kpachaara anya dị ka m kwesịrị banyere ewu na na mmekọrịta, na aka iso na-agbalị ịgwa ya banyere Jizọs. Na o yiri ka m na-eche otú a na-. The ajụjụ m chọrọ ịjụ bụ ya mere? Gịnị obi n'ọnọdụ kwesịrị ka a ofu? M mkpa m n'uche ka a ọhụrụ. M ga-echeta ihe mere m…
Gịnị Bụ Gospel? si Ebe ọ chọrọ Chineke on Vimeo.
Ọzọ clip si m N'ajụjụ ọnụ Ebe ọ chọrọ Chineke. Ha jụrụ m ma m nwere ike RAP Oziọma na 2 nkeji. Nke a bụ m anwa
-Adịbeghị anya Gospel Coalition video nke Eric Mason, Lecrae, na m na-ekwu banyere nwa folks na “gbanwee” nkà mmụta okpukpe